Tallaabooyinka ay Reer Galbeedka ka Qaadayaan Sucuudiga, ka Dib Dilkii Jamaal Khaashuqji. |
Tallaabooyinka ay Reer Galbeedka ka Qaadayaan Sucuudiga, ka Dib Dilkii Jamaal Khaashuqji.
Waxaa sii xoogeysanaya cadaadiska waddamada reer galbeedka lagu saarayo iney jawaab adag Sucuudiga ka siiyaan dilka wariyihii caanka ahaa ee Jamal Khaashuqji, oo lagu khaarajiyay qunsuliyadda uu Sucuudiga ku leeyahay magaalada Istambul ee dalka Turkiga.
Mareykanka ayaa ah waddanka laga dhowrayo falcelinta ugu saameynta badan ee arrintaas la xiriirta, inkastoo xiriir wanaagsan oo diblomaasiyadeed iyo dano badan ay ka dhexeeyaan labada dal.
Madaxweyne Donald Trump ayaa Salaasadii sheegay in dilka Jamaal Khaashuqji uu ahaa mid loo daboolay si aan horay taariikhda u soo marin.
Trump ayaa ficilkaas ku tilmaamay mid qallafsan oo aysan ahayn in xitaa lagu fikiro.
Mas’uuliyiinta boqortooyada Sucuudiga ayaa dhankooda sheegay iney qaadeen tallaabooyin lagula xisaabtamayo dadkii ka dambeeyay dilkaas oo ay horay ugu tilmaameen “khalad aad u weyn”.
Image captionPompeo: Waxaan ka fiirsanaynaa cunaqabataynta aan soo rogayno nooca ay tahay
Maxaa xiga oo ay Mareykanku samayn doonaan?
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in dalkiisu uu ka fiirsanayo sidii cunaqabateyn noocyo kala duwan ah loogu soo rogi lahaa shakhsiyaadka la rumey sanyahay iney ku lug lahaayeen dilka wariye Jamaal Khaashuqji.
Mr Pompeo ayaa ka dhawaajiyay in cunaqabateyntu aysan ku ekaan doonin oo kaliya in xayiraad dhanka fiisaha ama dal-ku-galka ah la saaro shakhsiyaadkaas.
Saraakiisha isha gaarka ah lagu hayo ayuu sheegay iney la shaqeynayeen sirdoonka Sucuudiga iyo qoyska boqortooyada, balse uusan magacyadooda xilligan shaacineynin.
“Ciqaabtani ma noqon doonto tallaabada ugu dambeysa ee ay qaadeyso dowladda Mareykanka” ayuu yiri.
Maxaa laga filayaa dowladda Ingiriiska?
Emily Thornberry oo ka tirsan xildhibaannada baarlamaanka Ingiriiska ayaa khudbad ay Isniintii ka jeedisay aqalka si kulul ugu cambaareysay dhaxal sugaha boqortooyada Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan, kaasoo ay ku tilmaantay inuu mas’uul ka ahaa dilka Jamaal Khaashuqji.
Mrs Thornberry ayaa xukuumadda ku boorrisay iney maamulka Riyaad kula xisaabtanto falkaas foosha xun ee lagu dilay wariyaha.
Sacuudigun ha ciqaabo dadkii dilka ka dambeeyey
Waxay sidoo kale sheegtay in xoghayaha cusub ee arrimaha dibadda ee Ingiriiska Jeremy Hunt looga baahan yahay inuu ka dhabeeyo ballan qaadkii uu dhawaan sameeyay ee ahaa in Sucuudiga uu ciqaab mari doono haddii ay rumoobaan eedeymaha loo jeedinayay, sidoo kalena laga fiirsan doono xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood.
“Caddeyn dheeraad ah miyuu u baahanyahay? Waa xilligii uu tallaabada u qaadi lahaa inuu weydiiyo su’aasha ku saabsan waxa ka dhacay Istanbul iyo cidda bixisay amarka. Dhammaanteen waan ognahay jawaabahaas, balse su’aasha taagan waxay tahay ‘mid noocee ah ayay noqon doontaa cawaaqib xumadii uu ballan qaaday iney mari doonaan Sucuudiga?’ ayay tiri.
Emily Thornberry ayaa Mr Hunt u soo jeedisay inuu tixgaliyo saddex arrimood oo kala ah
-Inuu hakiyo qandaraaska hubka looga iibinayo Sucuudiga.
-Cunaqabateyn lagu soo rogo saraakiisha sar sare oo uu ka mid yahay Maxamed Bin Salmaan.
– Inuu sii wado qaraarkii xabad joojinta Yemen ee ay xukuumadda Ingiriiska horgeysay golaha ammaanka, uuna dhagaha ka fureysto awoodda qayaxan ee ay xukuumadda Riyaad isku hor taagtay qaraarkaas.
Australia oo ka fiirsaneysa qandaraas ay hub uga iibineyso Sucuudiga?
Dowladda Australia ayaa sheegtay in ay ka fiirsaneyso mamnuucista heshiis ay qalab Milatari uga iibineyso Sucuudiga, ka dib dilkii wariye Jamaal Khaashuqji oo ahaa suxufi dhaliili jiray boqortooyada Khaliijka.
Saraakiisha Australia ayaa ku dhawaaqay in aysan wax wada shaqeyn dhinaca difaaca ah la sii sameyn doonin xukuumadda Riyaad.
Marise Payne oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Australia ayaa maanta oo Arbaco ah baarlamaanka dalkeeda ka codsatay iney soo saaraan go’aan ku aaddan in Australia ay dalalka kale ku taageerto ka noqoshada heshiisyada ganacsi ee hubka looga iibiyo sucuudiga.
“Xaqiiqdii arrintan waxaan u aragnaa mid aad iyo aad saameyn u leh oo gaartay heerkii ugu sarreeyay” ayay tiri Payne.
Ruuxaani: Riyaad Maraykanka la’aantiis ma dili kari lahayn Khaashuqji
Iran oo ka hadashay arrinta Khaashuqji
Dowladda Iran ayaa markii ugu horreysay ka hadashay dilka Jamaal Khaashuqji, waxayna eedeynta ugu weyn dusha uga tuurtay xukuumadda Washington ee uu hogaamiyo Madaxweyne Donald Trump.
Madaxweynaha dalka Iiran Xassan Rooxaani ayaa maanta sheegay in Sacuudiga aysan awood u yeelan lahayn dilka Suxufigaas, haddii aysan taageero buuxda ka heysanin Mareykanka, sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee dalka Iiran ee IRNA.
“Uma maleynayo in waddan uu ku dhiirran karo dambi sidaas u weyn haddii aysan difaaceynin America”.
Dalalka Iiran iyo iyo Sucuudiga ayaa ah labo waddan oo si weyn isugu khilaafsan arrimaha gobolka bariga dhexe, waxayna siyaabo kala duwan u taageeraan dhinacyada isku haya dalalka Suuriya iyo Yemen.
Dowladahan ayaa sidoo kale ku kala aragti duwan arrimaha siyaasadda ee ka aloosan dalalka Ciraaq iyo Lubnaan.
Turkiga oo uu dalkiisa ka dhacay dilka Jamaal Khaashuqji
Maalintii Salaasada ee shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Turkiga Racep Tayyip Erdogan uu sheegay in dilka Khaashuqji uu ahaa mid la sii qorsheeyay mar hore.
Erdogan ayaa maanta oo Arbaco ahna sheegay in dalkiisu uusan marnaba raalli ka noqon lahayn iney caddaaladda ka baxsadaan dadkii fuliyay dilka suxufigaas.
Jamaal Khaashuqji ayaa la waayay 2-dii bishan Oktoobar, ka dib markii uu gudaha u galay Qunsuliyadda Sucuudiga ee magaalada Istanbul, xilli uu doonanayay warqado uu uga baahnaa qaban qaabada guurkiisa.
Usbuucii la soo dhaafay ayay soo shaac baxday in la dilay, walina waxaa arrintiisa ka taagan muran hareeyay caalamka oo idil.
BBC Somali Source.